Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Stephen Asiimwe no nitarika ny Sector Private Tourism Uganda
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Oganda • WTN
Ny Biraon'ny Tale ao amin'ny Oganda Private Sector Foundation dia manambara ny fanendrena an'Atoa Stephen Asiimwe, ho Tale Mpanatanteraka vaovao.
Izy no nisolo toerana an'Andriamatoa Gideon Badagawa nodimandry tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity.
Atoa Assimwe dia mpitarika fanta-daza ho an'ny fizahan-tany Ogandà ary hajaina maneran-tany. Ny tarehiny dia ny endrik'i Uganda Tourism tamin'ny seho sy hetsika ara-barotra fitsangatsanganana sy fizahan-tany maro, raha nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019, i Asiimwe dia niasa ho tale mpanatanteraka ao amin'ny Uganda Tourism Board (UTB).
Francis Kisirinya no tale mpanatanteraka mpisolo toerana hatramin'ny nahafatesan'i Badagawa tamin'ity taona ity tamin'ny volana Jona.
Araka ny voalazan'ny Dr. Elly Karuhanga, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny PSFU, dia mihatra avy hatrany ny fanendrena. Talohan'ny fanendrena azy dia talen'ny politika sy ny fampandrosoana ny fandraharahana ao amin'ny PSDU i Asiimwe.
Manana traikefa amin'ny asa fanaovan-gazety, no lehiben'ny mpanatanteraka sy tonian-dahatsoratry ny Herinandron'ny raharaham-barotra any Afrika Atsinanana nanomboka tamin'ny 2004 ka hatramin'ny 2014. Niasa tao amin'ny New Vision ihany koa izy tamin'ny naha-mpanao gazety, tonian-dahatsoratra, ary tonian-dahatsoratra momba ny raharaham-barotra tamin'ny 1993-2004.
Manana mari-pahaizana maîtrise momba ny fitarihana sy ny fitantanana ny fikambanana avy amin'ny Development Associates International (DAI) miorina any Etazonia izy ary mifandray amin'ny Uganda Christian University (UCU). Izy koa dia nahazo mari-pahaizana bakalorea amin'ny Siansa sosialy nahazo diplaoma momba ny Siansa Politika sy Sosiolojia avy amin'ny Oniversite Makerere.
Asiimwe dia manana traikefa 30 taona eo amin'ny sehatry ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina amin'ny sehatry ny fitantanana, ny fitarihana ary ny fitarihana orinasa.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina niarahaba an'Andriamatoa Assimwe. Io no nambaran'i Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, ary mpamoaka ny eTurboNews: “Atoa. Mpinamana nandritra ny taona maro i Asiimwe. Matoky aho fa zava-bita lehibe ity fanendrena ity, tsy ho an'i Stephen ihany, fa ho an'ny fizahan-tany any Uganda manontolo. "